Friday December, 13 2019 - 03:59:49
Wednesday August 07, 2019 - 14:12:57 in by salman abdi
Musharixiinta oo aan wali is diiwaan-galin ayaa dood ka qaba sharci ahaanshaha guddiga doorashada Jubbaland, iyaga oo dhinaca kala dalbaday in wax ka badal lagu sameeyo hannaanka ay hadda wax u socdaan.
Sharuudaha ay ku xireen doorashada musharixiinta ayaa waxaa ka mid ah :-
1: In Xildhibaannada ay soo xulaan Odayaasha Saxda ah ee Jubbaland.
2: In hal qof loo soo xulo kursi Xildhibaan
3: In doorashada Madaxweynaha Baarlamaanka Jubaland ay qabtaan.
4: In doorashada ay ka dhacdo goob ka madax bannaan Xarumaha Maamulka Jubbaland sida xarunta QM.
5: In Ammaanka goobta doorashada iyo amaanka musharixiinta ay sugaan Ciidamada AMISOM.
6: In doorashada Jubbaland ay goobjoog ka noqdaan Xubno ka socda Dowlada Federaalka
7: In in Goob joogayaal Caalami ah la helo sida Xubno ka socda Beesha Caalamka.
8: In Warbaahinta gudaha iyo tan dibadda ay goobjoog ka ahaadaan doorashada.
Doorashada oo lagu wado in ay dhacdo daba-yaaqada bishan Augusto, ayaa wali waxaa ku hareereysan shaki la xiriira in ay ku dhici karto waqtigii loogu talagalay madaama wali ay jiraan dooddo ka imanaya dhinaca musharixiinta la baxay Isbadal -Doonka ee kursiga kula tartamaya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
01/12/2019 - 12:35:02
Madaxweynaha Jubbaland oo kulamo ka wada magaalada Nairobi ee dalka Kenya
29/11/2019 - 13:26:48
Kulan Xasaasiya Ah Faysal Cali Waraabe Iyo Madaxweynaha Jubbaland Oo Ku Kulmay Nairobi.
28/11/2019 - 12:00:38
Gudaha:-Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo Madaxweynaha Ku Hor-dhaariyey Xubnaha Laysku Khilaafay ee Doorashada
25/11/2019 - 14:38:25
Hay'adda Nabad-Sugida oo soo bandhigtay shaqsigii miinada ku xiray gaarigii shalay ku qarxay Muqdisho
24/11/2019 - 13:33:29
Daawo:-"Ciddii rabta in ay la shaqeyso Dowladda Dhexe looma joojinayo xilka waa laga qaadayaa"Jubbaland.
23/11/2019 - 13:12:19
17/11/2019 - 14:22:02
Gaadiidley xiray Isgoyska KM4 magaalada Muqdisho
27/10/2019 - 12:23:12